बाल दिवस २०२०: भारतमा यस दिनको लागि क्रिएटिवल फैन्सी ड्रेस कस्ट्यूम आईडियाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - गर्भावस्था-प्यारेन्टिंग
बाल दिवस २०२०: भारतमा यस दिनको लागि क्रिएटिवल फैन्सी ड्रेस कस्ट्यूम आईडियाहरू
खेलकुद योनेक्स-सनराइज इंडिया खुला २०२१ मेको लागि सेट, बन्द ढोका पछाडि आयोजित गर्न
घर गर्भावस्था प्यारेन्टिंग बच्चाहरू बच्चाहरू ओआई-लेखाका द्वारा शबाना नोभेम्बर १,, २०२० बाल दिवस: बच्चाहरूको लागि फैन्सी ड्रेस विचारहरू तपाइँको बच्चालाई फेन्सी ड्रेस कोपशाइन | बोल्डस्कीमा यस नजर दिनुहोस्
बच्चाहरू परमेश्वरको सबैभन्दा बहुमूल्य उपहार हुन्। तिनीहरू प्यारा, आराध्य छन् र जो कोहीको अनुहारमा एक मुस्कान ल्याउन सक्छ। निस्सन्देह, यो केवल उनीहरूको एक पक्ष हो, तर हामी उनीहरूको अन्य शरारती, गन्दा र पागल पक्षलाई बेवास्ता गर्न छनौट गर्दछौं।
सानो घरको वरिपरि दगुर्दै गरेको क्लिटर-तालीबिना एउटा घर पूर्ण मानिदैन। हाम्रो दिन उनीहरू स्कूल जान नचाहेको लागि रुँदै उठेर सुरु हुन्छ र उनीहरूले घरको चारैतिर दुध छिचोल्दै अन्तमा उनीहरूलाई सुत्नु अघि उनीहरूलाई पोषणको अन्तिम खुराक दिनको लागि गरिएको प्रयासलाई अन्त्य गर्दछन्। यद्यपि हामी यी साना राक्षसहरूबिना जीवनको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं।
हाम्रो देशमा बाल दिवस धेरै धूमधामका साथ मनाइन्छ। सबै स्कूलहरू र शैक्षिक संस्थाहरूले यस दिनको महत्त्वको युवा दिमागलाई जागृत गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्। साथै, फेन्सी ड्रेस प्रतियोगिताहरू प्रायः बाल दिवस समारोहको एक हिस्सा हुन्।
यदि तपाइँको बच्चाको स्कूलले फेन्सी पोशाक प्रतियोगिता गरिरहेको छ भने, सम्भावनाहरू तपाईंले पहिले नै केहि विकल्पहरूको बारेमा सोच्न सुरु गरिसक्नुपर्दछ।
यहाँ तपाईंको बच्चाहरूको आगामी फ्यान्सी ड्रेस प्रतियोगिताको लागि केहि अनौंठो विचारहरू छन्। एकचोटी हेर्नु।
१) भगवानको प्रतिनिधित्व
यो तपाईंको बच्चाको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय फैन्सी ड्रेस थिम हो। भारत धेरै देवताहरूको देश हो र उनीहरू भन्छन कि बच्चाहरु ईश्वरको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। यसले कुनै पनि फेन्सी पोशाकको लागि यस थीमलाई योग्य बनाउँदछ।
छवि सौजन्य: रिद्धि आर
२) सानो परी
सबैभन्दा राम्रो फेन्सी ड्रेस थिम, यो तपाईंको सानो परीको लागि उपयुक्त छ। कल्पना गर्नुहोस् कि एक स्वर्गदूतले जस्तो पहिरन लगाए। तपाईंको राजकुमारी पक्कै पनि पूरै बालवाडी कक्षाको सबैभन्दा प्यारा एक हुन जान्छ। तपाईको मार्गमा आउने केहि गम्भीर प्रशंसाका लागि तयार हुनुहोस्।
छवि सौजन्य: स्यायाम
)) बेबी कृष्ण
अझै अर्को पौराणिक विषयवस्तु, तपाईंको बच्चालाई कृष्णाको रूपमा पोशाक निश्चित रूपमा उसलाई / उनको प्रतिस्पर्धाको लागि अनुमति दिनेछ। ऊ / उनी सबै नै शरारती कृष्णको बिल फिट हुनेछन्, यदि ऊ / उनी पनि शरारती छन।
छवि सौजन्य: विभा
)) ओणम शैली
भारत धेरै संस्कृति र धर्महरूको भूमि हो। यहाँ हामी दक्षिण भारतीय परम्परालाई यस सानी केटीले अगाडि देख्न सक्छौं। यो रूप सरल र धेरै आकर्षक छ। तिनीहरूलाई डाय जस्तो प्रोप्सहरू ह्यान्डल गर्नका लागि पोखरीले प्रमाणिकरण गर्नेछ।
)) सेन्ट / पण्डित
यहाँ, बच्चा एक संत / पंडित को रूप मा तैयार छ, जो धेरै विद्वान र एक बुद्धिमान मानिस भनेर परिचित छ। यस विशेष पोशाकले हामीलाई महान संत - द्रोणाचार्यको सम्झना दिलाइरहेको छ, जो महाभारत युगको समयमा सबैभन्दा बुद्धिमान्‌ मानिन्थ्यो। यो मनमोहक पोशाक धेरै मन जित्न निश्चित छ।
छवि सौजन्य: अथर्व
पपीता मधुमेह बिरामीहरूको लागि राम्रो हो
)) जैन दम्पती
यहाँ, हामी एक केटा र केटीलाई आराध्य जैन जोडीको रूपमा प्रस्तुत देख्न सक्छौं। यो फेन्सी ड्रेस विचारले हाम्रो समाजमा व्याप्त विभिन्न संस्कृतिहरू र सबै मिलेर बसोबास गर्ने बारेमा देखाउँदछ। हाम्रा बच्चाहरूलाई अन्य धर्महरू र संस्कृतिहरूतर्फ सहिष्णुताको महत्त्व सिकाउनु धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
छवि सौजन्य: निखिल र निकिता
)) आधुनिक महिला
यो फेन्सी पोशाकले हाम्रो समाजमा आधुनिक महिलालाई चित्रण गर्दछ। स्लीभलेस ब्लाउजको साथ परम्परागत साडी लगाउनु भए पनि नाक पिनको साथ फेरि परम्पराको भावना ल्याई, यो लुक एकदम आश्चर्यजनक छ। यसले देखाउँदछ कि आधुनिक भारतीय महिला समयको साथ अघि बढिरहेकी छ, तैपनि उनले आफ्नो संस्कृति बिर्सेकी छैन।
छवि सौजन्य: औजस्वी शर्मा
)) प्यारा दुलही
यहाँ दुलहीको पोशाकमा रहेको मनमोहक सानो स्वर्गदूतको तस्बिर छ। रातो लहंगे, गहना र अल्ताको साथ, उनी सम्पूर्ण देशको सबैभन्दा प्यारी दुलही हुन्, के तपाईलाई लाग्दैन? यो फेन्सी ड्रेस थिम पनि साधारण तर प्यारा छ।
छवि सौजन्य: आइरा अज़ीन
)) परी कथा पात्रहरू
परीकथा आज बच्चाहरू माझ मनपर्ने छ। यहाँ हामी टिंकरबेलको पोशाकमा रहेको केटीलाई फूल हेड-गियरले पूरा देख्न सक्छौं। उनको पोशाक ठीक बिन्दुमा छ। बच्चाहरू धेरै मनमोहक देखिन्छन् जब उनीहरू आफ्नो मनपर्ने परी कथा पात्रहरूको रूपमा लिन्छन्।
१०) अद्वितीय विचारहरू
यी फेन्सी ड्रेस प्रतियोगिताको लागि धेरै विचित्र विषयवस्तुहरू हुन्। बच्चा यहाँ ग्यास सिलिन्डर, पवनचक्की इत्यादिको रूपमा तयार छ। यो पूर्व-किशोरहरूका लागि उपयुक्त छ तिनीहरूलाई नवीकरणीय उर्जाको अवधारणा बुझ्न र वरपरका क्षेत्रहरू सफा राख्नुको महत्त्वको बारेमा बुझ्न तिनीहरूलाई।
त्यस्ता विषयवस्तुहरूले आमा प्रकृतिप्रति संवेदनशील हुने सोच जगाउँदछ।
छवि सौजन्य: अव्यक्थ
११) क्यूटस्ट ग्रम
तपाईंको बच्चालाई ड्रेसिंगको अर्को प्यारा तरीका। उहाँ महँगो कान्छीवाराममा सजिएको दक्षिण भारतीय केटा जस्तो देखिनुहुन्छ। माला र अन्य सामानहरूले यस दृश्यलाई बढी विश्वासनीय र बच्चालाई बढी मनमोहक बनाउँछ। के तपाईं उसलाई वरिपरि लैजान चाहानुहुन्न, र उसलाई यस कुराको लागि पहिलो पुरस्कार दिनुहोस्?
छवि सौजन्य: आर्यन कामथ
क्यूटस्ट पुलिस अधिकारी
बलिउडलाई धन्यबाद, पुलिस अधिकारीहरू हाम्रो समाजको नायक भएका छन्। यो प्यारा सानो पुलिस अफिसर पर्दामा हाम्रो मनपर्ने फिल्म स्टार भन्दा कम छैन। हेलोवीनको पश्चिमी अवधारणा हाम्रो देशमा बढ्दै गइरहेको छ। त्यहाँ जताततै हेलोवीन-थीमाधारित पार्टीहरू छन्। यहाँ, हामी एक पुलिस अधिकारी को रूप मा तैयार एक प्यारा बच्चा देख्न सक्छौं। जहाँसुकै राखिएको बिभिन्न ज्याक-ओ-लालटेनहरूले ठाउँ र पोशाक पूर्ण स्पूकी वाइब्स दिन्छ।
छवि सौजन्य: म पाण्डेलाई घृणा गर्छु
रातमा फल खानको लागि सही समय
फल खानको लागि उत्तम समय के हो?
कच्चा प्याज खाँदै छ तपाईंको लागि नराम्रो
कसरी न nailsमा सेता दागहरू हटाउने
केटीलाई प्रभावित गर्ने उत्तम तरिका
एरंडीको तेल र कपालको वृद्धिको लागि बदामको तेल